Ingxenye yesibili 2013 kwaqala yokuthengisa smartphone Huawei G700. Le divayisi eka phakathi intengo uhla, kusekelwe isiteji sasivumela elikhiqizayo hardware. Ngakho izindleko zakhe nesizotha kakhulu.
I Computing inhliziyo smartphone
Kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, ingxenye eyinhloko iyiphi uhlelo lwekhompyutha CPU. Yini-ke ukukhiqiza kakhulu, ngcono. Huawei G700 kusekelwe processor 4-core amaShayina inkampani "umtapo" MTK6589 imodeli. Its imvamisa iwashi kuyinto 1.2 GHz. Ngamunye cores kusekelwe izakhiwo "Cortex" A7 kwamabhuku. Uma sikubeka kalula, ukusebenza ngamunye ngamunye liphansi, kodwa uma uhlanganisa ndawonye, unayo isixazululo kuhle ukusingatha iningi lezinkinga namuhla ngaphandle kwezinkinga. Ngesikhathi esifanayo songa amandla lokhu chip ongenasici. Kuye yinkimbinkimbi inkinga, imvamisa iwashi ngayinye cores ingahluka ku uhla kusuka 300 MHz ukuze 1.2 GHz. Futhi lokhu akuyona yonke. Umnyombo uyakwazi off ukonga amandla webhethri uma kungenziwanga esetshenziswa solwazi ukucutshungulwa ngesikhathi samanje.
Ayikho izindaba kancane ukuthi ayemakhulu amathemba ababenawo ngesikhathi Huawei G700 kanye ihluzo adaptha. Njengoba le divayisi okuhlangene chip design SGX544 PowerVR. Nalapha futhi, ulindele ukusebenza lokukwazi akuveli kuye. Nokho amandla ayo Computing kumanele imisebenzi kunazo nsuku zonke, kusukela ezingosini ze amasayithi ziphethe ukubukela amabhuku Okuqukethwe akuzwakali namathoyizi. Isibuko kule smartphone - 5 amasentimitha. isinqumo salo 1280 Amaphikseli okusezingeni eliphezulu futhi 720 - ububanzi. inhlanganiso yabo 294 PPI, ibonakala isithombe sesikrini kumsebenzisi-HD-izinga. Hardware inikeza ukucutshungulwa ompompi abafinyelela kwabahlanu phezu inzwa elenziwe ngumuntu ubuchwepheshe capacitive. Isibonisi kusekelwe qualitative IPS--matrix okuyinto bekwazi ukubonisa oda 16 million imibala. Okungukuthi, abangabantwana ikhwalithi yesithombe, uyabukeka emehlweni, le nguqulo umbala ngokubonisa smartphone, "Huawei G700» ekahle. Sekukonke, ihlanganisa izinto ezithi intengo nekhwalithi.
Kodwa kuthiwani inkumbulo?
Iphuzu oqinile Memory Huawei G700. analogs Iningi kudivayisi ahlome RAM (umthamo 1 GB), ngokushesha iningi standard, okwamanje yethulwa emakethe (DDR3), wakha nge namandla 4 GB. Njengoba yokubika igajethi kithi, sikhuluma 2 GB we-RAM kanye elifanayo ukusebenza, futhi 8GB memory ehlangene. Okusho ukuthi, njengoba yokuqala futhi esimweni sesibili, inani kabili. Lena indlela engcono kakhulu kuthinta oyinhloko kudivayisi umkhiqizo. Kukhona slot zokushutheka kwimemori khadi. Kulokhu asekelwe MicroSD format ukulungiswa angafika ku-32 GB. Yilokho ngokwanele ukuba agqoke igajethi lonke bunch of izicelo ezahlukene, amabhayisikobho nomculo.
Ucezu zakudala shoka ekuskrini ukuthayipha - kumayelana Huawei G700. Izithombe zithunyelwe ku ukunakwa kwakho - lingobunye ubufakazi. Idivayisi iyatholakala ngemibala emibili: abamhlophe nabansundu. Ubukhulu devaysa kuyinto 142 mm ubude 722 ububanzi. Ngakho ukujiya igajethi - amamilimitha angu-9 kuphela. Njengoba idivayisi abasesigabeni esiphakathi, kuba ukusebenza kakhulu. isisindo salo 155 amagremu. Front (ngezansi) izinkinobho ezintathu zakudala: imenyu, ikhasi lasekhaya, esikrinini esandulele. Lapha ungakwazi futhi uthole umgodi-microphone esihle. Kuboniswa ku iphaneli phansi ejwayelekile microUSB port. Ngalo, ukushaja ibhethri noma kungenziwa exhunywe computer siqu.
Ngenhla isikrini yesifakwandlebeni, embozwe anezikhala metal. Kwesokunxele, efana izinhlobo eziningi kuleli kilasi, sahlala ivolumu kwemizwelo. Ngakolunye uhlangothi somzimba samanje off inkinobho. Kodwa phezu wafihla 3.5-mm jack ngoba zangaphandle isikhulumi uhlelo. On ezingemuva uhlangothi, phansi, isipikhasefoni limbozwa ngehele metal zokuhlobisa. Umzimba impahla - plastic. Khombisa senziwa ukwaziswa okufanayo, futhi akukho enamathela zokuzivikela. Lizungezwe emhlabeni azungezwe we faka i-chrome. Ngokuvamile, ngaphandle ifilimu zokuzivikela nje akakwazi ukukwenza. Namuhla kunesimo esithi asifane izindlu - ikhava kunesidingo.
Ikakhulu Huawei G700 ikhamera elise ohlangothini emuva. Kusekelwe matrix 8 megapixel. othomathikhi kwesithombe ubuchwepheshe ukhona. Ukuze thatha izithombe namavidiyo ebumnyameni nge ezifuywa LED-flash wakhe. sokulungiswa okukhulu etholwe izithombe digital 3264 kuya 2448 Amaphikseli. Ukuze ividiyo, lesi silinganiso kuyinto 1920 by 1080 Amaphikseli, okungukuthi, e-HD izinga format. Kodwa hhayi ikhamera izici ezifanayo kungaba ozibongayo. Kukhona isivele iyasebenza matrix 1.3 megapixel. Ikhwalithi yesithombe mediocre at, kodwa kungcono anele amakholi wevidiyo (futhi yiso le nhloso futhi kuba).
Elinye iphuzu oqinile kwebhethri Huawei G700. Izibuyekezo abanikazi ujabule lokhu model smartphone - lingobunye ubufakazi. Kulokhu kuba lithium ibhethri nomthamo 2150 MA / h. Amalungu bathi at ubuncane ukulayisha nobukhulu bayo ngokwanele emsebenzini isonto lonke. Kodwa nge more ukusetshenziswa kakhulu - usuku, esiphezulu - kwi 2. Ngaphansi isibonisi idayagonali 5 amayintshi futhi ngempela kahle platform hardware kuyinto inkomba enhle kakhulu ukuthi akuzona zonke kudivayisi ekilasini yayo kungaba ozibongayo.
Hhayi uhlelo evamile ezisebenza efakwe Huawei G700. firmware, ukufakwa devayse manje ukhuluma inguqulo "Android" ayebalelwa 4.2, ikhodi-okuthiwa "Dzhilli Bin". Ungishiya uhlobo akusebenzi. Noma kunjalo, kwanele ukusebenzisa zonke izicelo. Kodwa iphuzu lalo gajethi ludinge ukuhlelwa okukhethekile we Emotion lenkampani efanayo Huawei. Ngezinye amaziyo kuqala nge zingavumi kakhulu ukusebenza. Kodwa uma usuyijwayele, uthola ukusebenza umfutho abalulekile.
Futhi ngaphambili wathi igobolondo Emotion, wathola impela eningi kanye nenye i-softhiwe. Okokuqala - nemisebenzi yezenhlalakahle. Kukhona "Twitter" futhi "Facebook". Kodwa-Russian "VKontakte" futhi "Ofunda nabo" ngeke ngaphezu kwalokho ufake kusukela "Play Store". Amawijethi nazo ezifakiwe. Kodwa imidlalo Huawei G700 e base kungukuthi enikeziwe. Ngakho kuyomelwe futhi ukufaka kusukela efanayo "Play Store". Ukuze ulalele MP3 umculo nomsakazo isofthiwe ezidingekayo likhona ekuqaleni. Futhi iyatholakala zingamathuluzi zakudala: Ikhalenda, alamu, Igalari (ngezithombe kokubuka izithombe) kanye wokubala. Nokho, Owokugcina kubo kufanelekile izibalo linesizotha. Kodwa eziyinkimbinkimbi izibalo ngosizo nzima ukwenza. Ngakho-ke kungcono le njongo ekhethekile zezibalo wokubala thwebula.
Cishe abantu ngothi lwabo, inkinga zingaxazululwa Huawei G700. Izimpawu kuye esixoxe ngayo ngasenhla nje, enze kube nokwenzeka ukuba bafinyelele esiphethweni ezinjalo. Ngokuphathelene ukufinyelela ku-intanethi le njongo ukusebenzisa isiphequluli third-party kangcono, isibonelo, "Opera." Yena ngaphandle ukuphequlula, ikuvumela ukuba ulayishe amafayela banoma yimuphi usayizi ngaphandle kwezinkinga. Ukuhlola izincwadi ngefomethi «* .pdf» kudingeka okwengeziwe ufake i-Adobe Reader noma olunye uhlelo lokusebenza efanayo. Ukuze ubone ukuthi indaba namafayela isipredishithi, kutuswa ukusebenzisa Kingsoft Office. Inzuzo yayo eyinhloko - wukuthi kumahhala. Ukuze ubuke amafilimu udinga ukufaka uhlelo olukhethekile, ezifana, MX Player. Nalapha futhi, lo mdlali imahhala. Iningi amathoyizi izoya kuleli devayse ngaphandle kwezinkinga. Ngakho kungenzeka ukufaka konke okuqukethwe kwenhliziyo, okumbalwa.
Mayelana nezokuThintana, lapha konke kulungile ngesikhathi Huawei G700. Izici ke kulokhu zimi kanje:
Dual-band zokuxhumana idatha module. Kuvumela umshini ukuze ziphumelele kumanethiwekhi njengoba lesibili isizukulwane nowesithathu. Kodwa ukuntuleka LTE ukwesekwa (okungukuthi, 4th inethiwekhi generation) akuyona ezibucayi: ifoni, phakathi lebanga lentengo. Ukuhlanganiswa amamojula eziphambili baye kakhulu anda izindleko zedivayisi.
Transmitter kuyinto ejwayelekile-Wi-Fi. Inikeza esiphezulu ukudluliswa kwedatha ijubane Inthanethi. Kodwa nansi uhla lezi amanethiwekhi wireless uphansi.
Ukuze uxhume nezinye devaysa efanayo efakwe-Bluetooth Ukubuyekeza 4.0. Kuyinto emuva iyahambisana amazinga pre-ekhona, ukuze izinkinga nge ukuthumela idatha olujwayelekile lokhu akufanele kwenzeke.
Ukuze uxhume i-PC esebenzisa USB esibonakalayo wokubuyekeza 2.0. Isokhethi efanayo liyasetshenziswa sokuzivuselela ibhethri.
Eceleni etholakala 3.5mm. ikhambi elilula futhi esebenzayo kunjalo, uma ufuna ku ibhethri ukushaja isikhathi ukulalela umculo.
Enye idivayisi chip - kuyinto ukutholakala GPS-Lidlulisela. Nayo ungakwazi ngokushesha futhi kalula ukwakha umzila ngokusebenzisa endaweni ongayazi.
Ukuze ukuzimisela enembile ngaphezulu endawo kusetshenziswa A-GPS-Lidlulisela. Ithola ibanga yeselula eseduzane futhi ngesisekelo lezi idatha, ilungisa idatha GPS.
I ethile kuphela lwalolu hlobo - iyona engekho seso lefoni. Kodwa la mazwi alibalulekile. amadivaysi eziningi zanamuhla alesi sigaba kakade ngaphandle le ndlela. Futhi uhla 10 amasentimitha akuyona efanele. It ngempumelelo ubuyisela-Bluetooth. Ngakho ukuthi ukungabi kwakhe akufanele kubhekwe njengento engeyona abaphumeleli. Ezinye izindaba zika-iqoqo ukuxhumana okufanayo kweminye imihlobo ekilasini yayo.
Ngokusho abasebenzisi bayo
value esihle kakhulu hardware imithombo kanye ne-software - kumayelana imodeli smartphone Huawei G700. Izibuyekezo abanikazi wanelisekile lokhu gajethi kuphela baqinisekisa. Yini ngokukhethekile wayecabanga abasebenzisi? Okokuqala, processor enhle ekwazi ukumelana iningi lezinkinga kuze kube manje. Okwesibili, inkumbulo okwanele. Izinkinga uma ufaka izicelo ingekho. Inamandla ihluzo subsystem kuzovumela amandla aphelele kule divayisi. Ngesikhathi esifanayo ukuzimela ke ezingeni elamukelekile.
Inhlanganisela esiphelele ukusebenza okuzimela - kuba njani ungakwazi ukuchaza in a Ngamafuphi Huawei G700. intengo ke ngaleyo ndlela njengamanje imi mayelana $ 250. Sekukonke, enhle kakhulu maphakathi no-range smartphone. izinsiza zayo elekhanda ngokwanele iminyaka 2-3 esilandelayo. Ngakho-ke uma ecabanga ukuthenga leli thuluzi, ungakwazi ukukhokha ngokuphepha ukunakwa kule imodeli. Luhle zonke izikhathi.
"Alcatel Idol 3" izibuyekezo abanikazi
Indlela ukufaka isihloko ku-iPhone?
Trucker umsebenzi. Zonke ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Uyini umshini intuthu?
Ngazi kanjani isiNgisi sami izingubo osayizi?
Aviary efulethini senja. Okuqukethwe izinja ekhaya
Kanjani ukwenza akhawunti ekhaya: izeluleko kongoti
Indlela yokudweba umama osenkulisa? Sinikeza iseluleko esilula!
IMITHETHO yokuthengisa imikhiqizo nezindlela ukwandisa